ယခုလကျရှိ တှဲနဆေဲဖွဈတဲ့ Idol အတှဲ ၃ တှဲ | News Bar Myanmar
ခဈြရတဲ့ Idol တှေ အခဈြနဲ့တှပွေီ့း ပြျောရှငျနကွေတာလညျး တကယျတော့ ဝမျးသာပေးရမယျ့ ကိစ်စတဈခုပါ။ Idol အခငျြးခငျြးတှဲနပေါတယျဆိုပွီး တရားဝငျ အတညျပွုထားတဲ့ အတှဲမြားမြား မရှိပါဘူး။
ရူးနိုငျလောကျတဲ့ အလုပျတာဝနျတှနေဲ့ လူမှုရေးအဖကျဖကျကပေးတဲ့ ဖိအားပေးမှုတှကွေောငျ့ Idol Couple တှရေဲ့ သကျတမျးဟာလညျး သိပျမကွာတတျပါဘူး။ ယခုဖျောပွပေးမယျ့ အတှဲ ၃ တှဲကတော့ လကျရှိ အတညျပွုထားတဲ့ အတှဲ ၃ တှဲပဲဖွဈပါတယျ။
1. Kang Daniel နဲ့ TWICE ရဲ့ Jihyo
ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ နှရောသီက Kang Daniel နဲ့ TWICE ရဲ့ Jihyo တို့ တှဲနပေါတယျ ဆိုတဲ့သတငျးဟာ ဟိုးလေးတကြျောကြျော ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျးပဲ သူတို့နှဈယောကျကတော့ လကျရှိအခြိနျထိ တှဲနကွေဆဲပါ။
2. HyunA နဲ့ Dawn
သူတို့နှဈယောကျကတော့ ရိုမနျ့တဈ အဆနျဆုံး အတှဲလို့ပွောလို့ရပါတယျ။ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးဟာ စိတျဝငျစားဖို့လညျး ကောငျးသလို နှဈယောကျသားဟာလညျး တဈယောကျနဲ့ တဈယာကျ ဘယျလောကျခဈြမွတျနိုးကွောငျး ပွသဖို့ကို မကွောကျရှံ့ကွပါဘူး။
သူတို့နှဈယောကျရဲ့ အခဈြအတှကျ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုဟာ ပရိသတျတှရေဲ့ Idol အခငျြးခငျြးတှဲတဲ့ အပျေါ မကောငျးမွငျမှုအပျေါကိုတောငျ ပွောငျးလဲပေးနိုငျလာပါတယျ။ ဒါဟာ ဝမျးသာစရာလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ HyunA နဲ့ Dawn ဟာ နှဈယောကျ အတှဲပုံတှကေို Instagram မှာ တငျလရှေိ့ကွပီး ခဈြစရာလညျး ကောငျးပါတယျ။
3. Super Junior’s Heechul နဲ့ TWICE ရဲ့ Momo
Heechul နဲ့ Momo တို့တှဲနပေီဆိုတဲ့ သတငျးအတညျပွုခဲ့တဲ့ အခါမှာတော့ ပရိသတျတှဟော ဒီအတှဲအတှကျ ဝမျးသာပွီး အားပေးထောကျခံ ခဲ့ကွပါတယျ။ တကယျတော့ Heechul ဟာ Momo ရဲ့ fanboy ဆိုတာ ပရိတျသတျတှေ သိကွပီးသား ဖွဈမှာပါ။
သူတို့နှဈယောကျဟာလညျး မအားလပျနကွေပမေယျ့ လကျရှိအခြိနျထိတော့ တှဲနကွေဆဲပါပဲ။ Heechul ဟာဆိုရငျ Momo နဲ့ပတျသကျပွီး အစီအစဉျတျောတျောမြားမြားမှာလညျး အစခံရလရှေိ့ပါတယျ။ ကဲ ဘယျ အတှဲကို အကွိုကျဆုံး ဖွဈမလဲ?
(Zawgyi) ယခုလက်ရှိ တွဲနေဆဲဖြစ်တဲ့ Idol အတွဲ ၃ တွဲ
ချစ်ရတဲ့ Idol တွေ အချစ်နဲ့တွေ့ပြီး ပျော်ရွှင်နေကြတာလည်း တကယ်တော့ ဝမ်းသာပေးရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုပါ။ Idol အချင်းချင်းတွဲနေပါတယ်ဆိုပြီး တရားဝင် အတည်ပြုထားတဲ့ အတွဲများများ မရှိပါဘူး။
ရူးနိုင်လောက်တဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေနဲ့ လူမှုရေးအဖက်ဖက်ကပေးတဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့် Idol Couple တွေရဲ့ သက်တမ်းဟာလည်း သိပ်မကြာတတ်ပါဘူး။ ယခုဖော်ပြပေးမယ့် အတွဲ ၃ တွဲကတော့ လက်ရှိ အတည်ပြုထားတဲ့ အတွဲ ၃ တွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. Kang Daniel နဲ့ TWICE ရဲ့ Jihyo
ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ နွေရာသီက Kang Daniel နဲ့ TWICE ရဲ့ Jihyo တို့ တွဲနေပါတယ် ဆိုတဲ့သတင်းဟာ ဟိုးလေးတကျော်ကျော် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ လက်ရှိအချိန်ထိ တွဲနေကြဆဲပါ။
2. HyunA နဲ့ Dawn
သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ ရိုမန့်တစ် အဆန်ဆုံး အတွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ စိတ်ဝင်စားဖို့လည်း ကောင်းသလို နှစ်ယောက်သားဟာလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယာက် ဘယ်လောက်ချစ်မြတ်နိုးကြောင်း ပြသဖို့ကို မကြောက်ရွံ့ကြပါဘူး။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်အတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ Idol အချင်းချင်းတွဲတဲ့ အပေါ် မကောင်းမြင်မှုအပေါ်ကိုတောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်လာပါတယ်။ ဒါဟာ ဝမ်းသာစရာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ HyunA နဲ့ Dawn ဟာ နှစ်ယောက် အတွဲပုံတွေကို Instagram မှာ တင်လေ့ရှိကြပီး ချစ်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်။
3. Super Junior’s Heechul နဲ့ TWICE ရဲ့ Momo
Heechul နဲ့ Momo တို့တွဲနေပီဆိုတဲ့ သတင်းအတည်ပြုခဲ့တဲ့ အခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေဟာ ဒီအတွဲအတွက် ဝမ်းသာပြီး အားပေးထောက်ခံ ခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ Heechul ဟာ Momo ရဲ့ fanboy ဆိုတာ ပရိတ်သတ်တွေ သိကြပီးသား ဖြစ်မှာပါ။
သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလည်း မအားလပ်နေကြပေမယ့် လက်ရှိအချိန်ထိတော့ တွဲနေကြဆဲပါပဲ။ Heechul ဟာဆိုရင် Momo နဲ့ပတ်သက်ပြီး အစီအစဉ်တော်တော်များများမှာလည်း အစခံရလေ့ရှိပါတယ်။ ကဲ ဘယ် အတွဲကို အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်မလဲ?
Next အခြောဆုံးမကျြနှာပိုငျရှငျ ( Best Face In The World) အဖွဈ ၂ နှဈဆကျတိုကျ ရှေးခယျြခံခဲ့ရတဲ့ BTS ရဲ့ V »
Previous « Chen ကို EXO က နှုတျထှကျဖို့တောငျးဆိုတဲ့ သတငျးစာ ကွညောတှထေညျ့ဖို့ ငှကွေေးစုဆောငျးနတေဲ့ "EXO-L ACE"